Share Save Lawyacado, December 28, 2020 (Haatufonline) – Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gaadhay Magaalada Lawyacado oo ku taala xadka labada dal Ee Somaliland iyo Jabuuti kadib markii uu socdaal dhinaca dhulka ah kaga soo amba baxay dalka Jabuuti. Madaxweyne Biixi oo todobaadkan socdaal shaqo ku joogay dalka Jabobuuti, kaas oo maanta ka soo amba-baxay, markii uu soo gaadhay gobolka Selel ee Somalilandna waxa si diiran u soo dhaweeyey shacabka gobolkaasi oo wadooyinka la taagnaa Boodhadh, Caleemo qoyan iyo Calanka Somaliland oo ay ku soo dhaweynayaan Madaxweynaha. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu socdaal dhinaca xeebaha ah uu ku soo maro xeebaha galbeedka Somaliland. | Gabiley News Online
Share Save Lawyacado, December 28, 2020 (Haatufonline) – Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gaadhay Magaalada Lawyacado oo ku taala xadka labada dal Ee Somaliland iyo Jabuuti kadib markii uu socdaal dhinaca dhulka ah kaga soo amba baxay dalka Jabuuti. Madaxweyne Biixi oo todobaadkan socdaal shaqo ku joogay dalka Jabobuuti, kaas oo maanta ka soo amba-baxay, markii uu soo gaadhay gobolka Selel ee Somalilandna waxa si diiran u soo dhaweeyey shacabka gobolkaasi oo wadooyinka la taagnaa Boodhadh, Caleemo qoyan iyo Calanka Somaliland oo ay ku soo dhaweynayaan Madaxweynaha. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu socdaal dhinaca xeebaha ah uu ku soo maro xeebaha galbeedka Somaliland.
December 28, 2020 - Written by admin
Ilaa saddex qof oo lagu sheegay in ay ahaayeen Askar ka tirsan ciidamada Dowladda ayaa toogasho lagu dilay degmada Waabari, gaar ahaan halka lagu magacaabo Buundooyinka sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ahaa.
Kooxo hubeysan ayaa la sheegay in mar kaliya ay rasaas ku fureen saddexdan ruux ee ka tirsanaa ciidamada dowladda iyaga oo intaa kaddibna goobta isaga baxsaday.
Ragga toogashada geystay ayaa la sheegay in ay wateen gaari yar oo kuwa raaxada ah oo markii danbana ay ku baxsadeen, iyadoo saddexda Askari ee la dilayna ka tirsanaayeen hay’adda nabad-sugida Soomaaliya.
Goobta ay toogashadani ka dhacday ayaa la sheegay in ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo baaritaanno halkaa ka sameeyay, laakiin uma aysan suurtagalin ay qabtaan kooxda dilka ka